एमालेको रामरमिता – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / एमालेको रामरमिता
एमालेको राजनीति फेर्न दोस्रो पुस्ता किन तयार छैन ? किनभने यो पुस्ता जोखिम लिन चाहँदैन । यसको वर्ग फेरिएको छ । जोखिम त्यसले लिन्छ, जोसँग गुमाउने केही हुँदैन । हिजो निरंकुशकालमा यी नेताहरूसँग गुमाउने केही थिएन । जिते ‘हस्तिनापुरको राज’ भन्ने थियो, हारे गुम्ने केही थिएन । आज गुम्यो भने सानसौकत, सत्ता, पद र प्रतिष्ठा, फेरि शून्यबाट संघर्ष थाल्ने आँट र चाहना यो पंक्तिमा छैन । त्यसैले राजनीतिका नाममा प्रहसन र रमिता हुँदा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त्यसलाई बदल्ने बाटोमा छैनन् । यो अवस्थामा एमालेरूपी फिनिक्स चरोले नयाँ काया कसरी पाऊला  ?
Previous: बाघको छालासहित दुई जना पक्राउ
Next: लागुऔषध ब्राउन सगुरसहित ३ जना पक्राउ